Yintoni isikuta sombane, senzelwe ntoni kwaye sisebenza njani | Iindaba zeGajethi
Yintoni isikuta sombane kwaye senzeleni
Isikuta sombane siyaqhubeka nokufumana ubukho kwimarike. Iye yaba yenye yezona mveliso zithengiswa kakhulu, kwaye ibekwe njengendawo elungileyo enokukwazi ukuhamba ngokulula esixekweni. Nangona abantu abaninzi bengazazi ezi ntlobo zeemveliso, okanye zonke iindlela abazikhethayo. Ke ngoko, siza kukuxelela ngakumbi ngazo ngezantsi.
Ngale ndlela, Siza kuba nakho ukwazi ngokucacileyo ukuba yintoni isithuthuthu sombane. Kananjalo indlela esebenza ngayo, ukongeza kuthelekiso lweemodeli ezithile, ukuze ubone izinto ezikhoyo ngoku kwintengiso kolu luhlu lwemveliso.
1 Yintoni isikuta sombane
2 Isikuta sombane sisebenza njani
3 Thelekisa isithuthuthu
3.1 Xiaomi Mi Isithuthuthu M365
3.2 ISmartgyro Xtreme IsiXeko esiMnyama
4 Isikuta sombane sikaHiboy
Yintoni isikuta sombane
Sibona isikuta sombane njengokuziqhelanisa nezithuthuthu zeklasikhi, ezo uzisebenzisile ngamanye amaxesha xa wawumncinci. Umahluko kule meko kukuba bane-injini, evumela ukuba iqhutywe kwaye ifikelele kwisantya esifikelela kwi-30 km / h kwiimeko ezininzi, ukongeza kubungakanani obukhulu, kunye notshintsho kuyilo oluthile (izibane, iziqhoboshi, njl.
Yenziwe ngeqonga elidibeneyo apho umsebenzisi azokuma khona. Sinamavili angaphambili kunye nevili elingasemva, kwaye kwicala langaphambili leqonga ibar evulekileyo, ihlala iphakama ngokulungelelaniswayo, apho kukho khona izibambo. Kukwiziphatho apho sidibana khona namafutha waqhekeza yesikuta.
Ngaphakathi kweli qonga sifumana isithuthuthu semoto. Amandla ayahluka phakathi kweempawu kunye neemodeli, kodwa uninzi lufikelela kwisantya malunga ne-20 okanye i-25 km / h ngaphandle kwengxaki. Ezantsi kweqonga elithi sifumana ibhetri yesikuta sombane. Yibhetri egcwalisekayo, ukuzimela kwayo kuya kuxhomekeka kwimodeli nganye. Ukuba kule ndawo ingezantsi, kubalulekile ukuba ingabethi okanye imanzi, kuba inokubangela iingxaki kuyo, okanye iyaphule.
Isikuta sombane siye sathandwa kakhulu xa kufikwa kumba wokujikeleza isixeko. Zizithuthi ezihamba kamnandi, esivumela ukuba sihambe ngokukhawuleza, ngenxa yesantya esifikelela kwi-30 km / h kwezinye iimodeli, ukuze sikuphephe ukuxinana kwezithuthi maxa onke. Ukongeza, izithuthi zabo zilula, kwaye asidingi ndawo yokuzipaka. Kuxhomekeka kwimodeli, sinethuba lokusonga, elenza kube lula ukuyigcina ekhayeni lethu ngaphandle kwengxaki.
Uninzi lwethu luyayazi njengesikuta sombane, nangona kukho namanye amagama ale mveliso, esinokuyifumana kwintengiso ngamanye amaxesha. Isikuta okanye isithuthuthu sombane ngamagama amabini esizifumana rhoqo, ngamanye amaxesha babizwa ngokuba yi hoverboard, nangona sele sibonile ukuba abafani.
Isikuta sombane sisebenza njani
Nje ukuba sibonile ukuba yintoni, sichaza ngokufutshane ukuba isebenza njani. Isikuta sombane sinemoto ngaphakathi, inoxanduva lwesithuthuthu ukuba sihambe ngawo onke amaxesha, ngaphandle kwempembelelo yomsebenzisi. Indlela yokuyiqala iyahluka ukusuka kwimodeli enye ukuya kwenye. Kukho iimodeli apho umsebenzisi kufuneka ayityhale, ngelixa abanye benamaqhosha amandla. Kuxhomekeka kuhlobo ngalunye.
Kwiphathi yokubamba yesikuta siza kufumana isantya kwaye saqhekeza. Ukusebenza ngale ndlela kufana nokuhamba ngesithuthuthu okanye ngesithuthuthu. Uninzi lwee-scooter zine-brake yesibini, ebizwa ngokuba yi-disc brake, ebekwe kwivili elingasemva. Inika isikuta ukhuseleko olongezelelekileyo xa unyathela, uphepha ukuskida okanye ukuwa okunokwenzeka.
Kwinxalenye engaphambili sihlala sifumana ukukhanya okuphambili. Kukho iimodeli ezithile zesikuta sombane zinezibane ze-LED emacaleni. Ngokumalunga nokukhanya kwangasemva, kuxhomekeke kuphawu ngalunye ukuyazisa okanye hayi. Ayizizo zonke i-scooter ezinesinye, uninzi luthanda ukungenisa ukukhanya kokumisa.
Xa uqhuba, umsebenzisi uza kuqhuba isithuthuthu ngesiphatho. Ke ukuba ufuna ukuya kwicala elithile, uya kusebenzisa izibambo ukusinga ngakwelo cala. Apho, kwindawo yokuphatha, unokukhawulezisa ngokulula okanye ukucothisa. Ke ukuqhuba kwayo akukho nzima.
Ke Siza kuthetha ngeemodeli ezininzi zezithuthuthu zombane esikhoyo ngoku kwimarike. Ngale ndlela, unokufumana umbono wohlobo lwezixhobo esizifumana ezivenkileni. Yintoni eya kukunceda ube nombono ocacileyo, ukongeza ekubeni nakho ukufumana isithuthuthu esikulungele kakuhle oko ukufunayo ngeli xesha.
Xiaomi Mi Isithuthuthu M365
IXiaomi luphawu olwaziwayo ngeefowuni eziphathwayo, kodwa ekuhambeni kwexesha kuye kwaziswa kuzo zonke iintlobo zamacandelo, kwaye basishiya nemveliso enje ngesikuta sombane. Imodeli ekufuneka ithathelwe ingqalelo, kuba uninzi bakugqala njengeyona ndlela ilungileyo kwintengiso Okwangoku.
Enkosi kule Isithuthuthu seXiaomi, Singakwazi ukufikelela kwisantya esiphezulu se-25 km / h. Ngaphandle kwamathandabuzo, sisantya esiya kusivumela ukuba sijikeleze isixeko ngendlela elula kwaye sifike kwindawo esiya kuyo ngokukhawuleza. Enye into ebalulekileyo kukuzimela osinika kona, malunga neekhilomitha ezingama-30. Isenokuba yinto encinci encinci ngokusetyenziswa kwemihla ngemihla.
Into elungileyo yile sinokugcina ibhetri yakho ngamaxesha onke. Kuba isikuta ngokwaso sinesalathiso sebhetri / umphathi, ukuze siyazi imeko yayo ngalo lonke ixesha. Ukongeza, inendlela yokugcina amandla, esinokuyisebenzisa ukuba ibhetri iyaphela. Ukusetyenziswa kwayo kulula. Ukuyicima okanye ukuyicima kufuneka ucofe nje iqhosha, ukuze siqale ukuqhuba.
Isikuta sombane sinobunzima obuyi-12,5 kg. Ubunzima obuqhelekileyo kwintengiso, kodwa iyasivumela ukuba sikwazi ukuyihambisa kakuhle, ngakumbi ukuba ngaxa lithile siyiphatha ngezithuthi zikawonkewonke. Singayisonga, nangona ibha apho ibar yokuphatha ingekho khona. Yiyo kuphela kodwa ungayifaka.
Siye saqhekeza kwii-handlebars, kunye nelinye idisk brake kwivili elingasemva. Kukho isibane esiphambili kwisikuta, kwaye sinazo izibane ezibi (brake) ezibonisa xa siqhekeza ukuze zibonakale ngokucacileyo. Ke sisikuta esihambelana ngokupheleleyo nokhuseleko. Le scooter iyafumaneka ngoku kwiAmazon a Akukho mveliso ifunyenweyoIxabiso lama-euro angama-399 »/].
ISmartgyro Xtreme IsiXeko esiMnyama
Isithuthuthu sesibini sesenye yeempawu ezaziwayo kwimarike ye hoverboard, kodwa zivelisa nezithuthuthu zombane. Yimodeli esemgangathweni ophezulu, ebonakala ngamandla ayo kunye nokusebenza kakuhle. Enkosi ngokufanayo Singakwazi ukufikelela kwisantya esiphezulu se-25 km / h. Sisantya esifanelekileyo, ukufikelela ngokukhawuleza kwindawo esiya kuyo esixekweni, kwaye sime ngokukwazi kwayo ukunyuka amathambeka ngaphandle kwengxaki.
Kule meko, Ukuzimela kwesikuta sombane sophawu ngama-20 km, enokuthi ibe nokusetyenziswa kancinci kwemihla ngemihla. Kodwa ayifanele kuchaphazela ukusetyenziswa kwethu. Ukutshaja kuhlala kuthabatha malunga neeyure ezintathu ukugqibezela, ukongeza, kukho isibonisi kwisikuta. Ke sinendlela elula yokuyilawula. Ke sizakuyibiza ekhaya okanye emsebenzini ngaphandle kwengxaki.
Ubunzima bale scooter yombane yi-12,5 kg, Ubunzima obuqhelekileyo. Kukhaphukhaphu ngokwaneleyo ukuba singakwazi ukuyiphatha nathi kwizithuthi zikawonke-wonke. Ukongeza, ngokukwazi ukuyisonga, sinokuyigcina ekhaya ngaphandle kokuthatha indawo eninzi. Enye into ekufuneka uyithathele ingqalelo.
Isithuthuthu esikhuselekileyo, enkosi kumavili anganyangekiyo ahambelana kakuhle nomhlaba, oya kusivumela ukuba siqhube lula. Sinenkqubo yokuqhawuka kabini kwisikuta, siqhekeza ngaphambili kwaye siqhekeza idiski yangasemva kwivili elingasemva. Ngaphandle kwamathandabuzo isithuthuthu esipheleleyo. Okwangoku Singayifumana kwiAmazon ngexabiso lama-euro angama-399, enkosi kwisaphulelo se-12%. ISMARTGYRO Xtreme IsiXeko ...Ungayithenga kule khonkco »/].
Isikuta sombane sikaHiboy
Siphelisa uluhlu ngesi sikuta sombane, ekunokwenzeka ukuba sesona silula kuluhlu. Iyasivumela fikelela kwisantya esiphezulu se-23 km / h, Ezifana nezinye iimodeli ezikuluhlu, ke uya kuba nakho ukuhamba kamnandi esixekweni usebenzisa sona. Ngokumalunga nokuzimela, cofa kancinci, kuba isinika uluhlu lweekhilomitha ezili-12.
Iphantse yabonakala ngathi iphantsi kwezinye iimodeli ezikuluhlu. Oku kuyenza ukuba ibe sisikuta esilungileyo kwimigama emifutshane, okanye ukusetyenziswa okuncinci rhoqo. Kubonakala ngokukodwa ukuba Isikuta sombane esilula kakhulu, ezinobunzima be-7,4 kg. Ikhaphukhaphu kunabantu abaninzi abahamba ngesithuthuthu okwangoku kwintengiso. Ubunzima obukhulu obuxhasayo ngama-90 kg, nto leyo eyenza ukuba ibe yinto elungileyo ebantwaneni.
Sijongene nesikuta sombane esenza umsebenzi waso kakuhle, kulula ukuyisebenzisa, kwaye ilula kakhulu kwaye kulula ukuyigcina. Inokhetho olunomdla ngakumbi kubantwana abasendlwini, ngakumbi ulutsha. Kuba ikwanalo nexabiso eliphantsi kunezinye iimodeli ezininzi kwintengiso.
Le scooter Iyafumaneka kwiAmazon ngexabiso lama-euro angama-219,99. Ixabiso elifanelekileyo lemodeli esemgangathweni. Umzekelo weHiboy S1 ...Ungayithenga kule khonkco. » /]
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Yintoni isikuta sombane kwaye senzeleni
Ungazikhuphela njani iividiyo zikaFacebook
I-Xiaomi Vacuum 2 ye-348 euros kunye nezinye iiSunles zoMhla zinikezelwa kwiTomTop